Hagahaaga abuurista jadwal la isku halayn karo oo ku dhejinta YouTube si loo kordhiyo daawashada - YTpals
Hagahaaga abuurista Jadwal la isku halayn karo oo ku dhejinta YouTube si loo kordhiyo daawashada
Waxaa jira maqaallo iyo baloogyo aan la tirin karin oo kula tali abuurayaasha YouTube-ka inay si joogto ah u dhejiyaan fiidiyowyada iyagoo ku dheggan jadwalka dhejinta. Si kastaba ha ahaatee, ma jiraan macluumaad badan oo ku saabsan sida abuuruhu u abuuri karo jadwal dhajinta guusha. Haddii aad ku cusub tahay goobta YouTube, sii akhri. Maqaalkan, waxaanu kula wadaagi doonaa dhammaan talooyinka ugu sarreeya ee aad ku dhaqmi karto jadwalka qoraalka YouTube ee keena natiijooyin adag.
Adeegso sifada soo noqnoqoshada YouTube-ka
Haddii aadan rabin inaad abuurto jadwal qoraal ah oo faahfaahsan, waxaad isticmaali kartaa muujinta soo noqnoqoshada YouTube-ka ee madalku siiso abuurayaasha macluumaadka. Waxaad hagaajin kartaa habaynta adoo isticmaalaya sifadan marka aad soo galeyso muuqaal gaar ah oo la daabacayo. Sida fiidyahaagu u soo shubayo, waa inaad gelisaa tafaasiil kala duwan si aad u dhamaystirto dejinta fiidyaha daabacaadda. Tani waa marka aad la kulmi doonto tab 'Muuqashada', taas oo kuu oggolaan doonta inaad jadwal u sameyso wakhtiga daabacaadda fiidyahaaga.
Samee jadwal qoraal ah oo kugu habboon
Abuurayaal badan oo ka mid ah waxyaabaha ku jira YouTube ayaa hadda daabacaya macluumaadka maalin kasta si ay kor ugu qaadaan aragtidooda iyo tirada macaamiisha. Si kastaba ha ahaatee, sababtoo ah qof kasta oo kale ayaa sii deynaya waxyaabaha maalinlaha ah macnaheedu maaha inaad sidoo kale tahay. Hubaal, haddii aad awooddo inaad joogteyso tayada sare leh oo samaynaysa rar-gelin joogto ah, hore u soco. Si kastaba ha noqotee, haddii aad ku qanacsan tahay daabacaadda 1 ama 2 fiidiyow toddobaad kasta, taasi waa waxa ay tahay inaad ku dhegto. Xusuusnow, waligaa ha u bixin tayada tirada - waxay ku siin kartaa natiijooyin muddo gaaban gudaheed, laakiin waxaad waayi doontaa daawadayaasha mustaqbalka fog.
Ka faa'iidayso istuudiyaha YouTube
Youtube Studio waa muuqaal u oggolaanaya abuurayaasha macluumaadka inay u maareeyaan nuxurkooda si habsami leh oo aan kala go 'lahayn. Marka laga reebo bixinta tiro badan oo ah sifooyinka maaraynta nuxurka, YouTube Studio waxa kale oo uu siiyaa hal-abuurayaasha nuxurka aragtiyo ku saabsan bandhigyada fiidiyowyadooda. Fikradahani waxay bixiyaan tafaasiil badan oo muhiim ah, oo ay ku jiraan waqtiyada fiidyahaaga sida aadka ah loo daawado. Raadraaca macluumaadkan waa muhiim, maadaama ay ku siin doonto fikrado wanaagsan oo ku saabsan waqtiyada ugu wanaagsan ee lagu dhejiyo YouTube 2022.
Ujeedo joogteynta wax walba oo dhan
Haddii aad tahay nooca YouTuber-ka oo daabici kara hal muuqaal todobaadkii, ha ka werwerin tirada fiidyaha la daabacay ee ay tahay inaad bixiso. Taa baddalkeeda, waxaan kugula talineynaa inaad diirada saarto joogteynta, taas oo u ogolaan doonta daawadayaashaada inay kaa filayaan wax macquul ah. Tusaale ahaan, haddii aad fiidiyoow soo dhejiso Isniin kasta, waa inaad hubisaa in wixii iman kara, ma jiri doonto Isniin tagta adiga oo aan muuqaal soo gelin. Tani waxay sidoo kale kaa caawin doontaa inaad dejiso yoolal macquul ah naftaada - yoolal aad gaari karto oo aad cabbiri karto.
U dhaaf fikrado gaaban YouTube-ka iyo YouTube Live sidoo kale
Mar, YouTube kaliya waxa uu oggolaaday abuurayaasha nuxurka inay dhejiyaan hal nooc oo fiidiyoow ah, laakiin maalmahaas waa hore ayay tageen. Maalmahan, YouTube wuxuu bixiyaa noocyo badan oo ka kooban, oo ay ku jiraan Shorts iyo Live. YouTube Shorts waxay u soo baxday inay u tartameyso TikTok iyo Instagram Reels ee sida aadka ah u guulaystay, waxayna u ogolaataa abuurayaasha nuxurka inay kala duwanaan karaan waxyabaaha ku jira. YouTube Live sidoo kale waa hab fiican oo abuurayaasha macluumaadka ay ugu dhawaadaan taageerayaashooda. Markaa, marka aad abuurayso jadwal qoraal ah, u samee jadwalyo gaar ah YouTube Shorts iyo YouTube Live.
Haddii aad rabto aragti lacag la'aan ah YouTube Si aad kanaalkaaga u hesho bilow duullimaad, maxaad uga fikiri weyday ka faa'iidaysiga adeegga sida YTpals oo kale. Marka laga reebo aragtida xorta ah iyo kuwa la jecel yahay, YTpals sidoo kale waxay u ogolaataa abuurayaasha nuxurka iibsato macaamiisha YouTube.
Hagahaaga abuurista Jadwal la isku halayn karo oo ku dhejinta YouTube si loo kordhiyo daawashada waxaa qoray YTpals Writers, 24 January 2022
Waa tan Dhammaan Waxa Aad U Baahan Tahay Inaad Ka Ogaato YouTube-Ka Muuqaalka
Abuuritaanka fiidiyowyada xayeysiinta YouTube-ka ee xayeysiiska ah ayaa si dhaqso leh loo sameeyay Shaki kuma jiro in fiidiyowgu uu ka taliyo adduunka internetka maalmahan. Boqolkiiba 85 ee suuqleyda ayaa sheeganaya in fiidiyowgu uu si aad ah waxtar ugu leh soo jiidashada dareenka internetka ...
Sida Loo Sameeyo Muqaalo La Dhan Ah Macaamiisha YouTube LGBTQIA
YouTube waa goobta loogu isticmaalka badan yahay aduunka oo dhan, taas oo ka dhigaysa mid aad u awood badan oo lagu gudbiyo fariimaha muhiimka ah. Fiidiyowyada ku jira YouTube-ka waxay awood u leeyihiin inay qaabeeyaan dhaqanka oo ay saameyn ku yeeshaan dadweynaha…
Sidee loo Abuuraa Fiidiyowyada YouTube ee La Iibsado
YouTube waa dhacdo weyn oo xilligan maanta ah halka suuqgeynta dijitaalka ah iyo warbaahinta bulshada ay si aad ah u wadaan darajada suuqgeynta sumadda. Barta fiidiyowga ee ay iska leedahay Google waxay leedahay in ka badan 2 bilyan oo isticmaaleyaal bil kasta ah oo adduunka oo dhan adeegsada — wax that